महाअष्टमी | विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवस | Hamro Patro
महाअष्टमी | विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवस
महाअष्टमी विशेष अडियो सामग्री
लिङ्गे पीङको मच्चाई अनि पारिवारिक जमघटका समयमा दसैँको निलो स्वच्छ आकाश अनि माधुर्यता बीचमा वर्षभरिको थकान बिट मार्दै दसँै मग्न हुनुभएको छ कि छैन ?
पछिल्लो समयमा बलि दिने विषयमा धेरै कमी आएको पाइएको छ । विशेषतः दसैँमा खसी काट्नैपर्ने, ज्वार्इँ–पाहुनालाई मासु खुवाउनैपर्ने चलन सम्मान र प्रतिष्ठाका रुपमा हेरिन्थ्यो । बिहानैबाट खसी काट्ने घरमा विशेष चहलपहल रहन्छ । पानी तताउने अनि काट्ने मान्छे बोलाउने लगायत कसको घरको खसी कति किलोको भयो ? कसको घरको खसी कुन रङ्गको ? आदिजस्ता जिज्ञासा र उत्सुकता विशेषगरी केटाकेटीहरूमा रहने गर्छ ।
आज फलाना ठाउँमा बाढी आयो रे !
आज यो ठाउँमा पहिरो गयो !
भुईँचालोले यति मान्छे लग्यो !
पृथ्वीका हरेक कुना अनि समग्र भूगोल नै अनेकन प्राकृतिक प्रकोप र विपत्तिहरूको सम्भाव्य जोखिममा छ । अझ मानवीय क्रियाकलाप, प्राकृतिक सम्पदाको अविवेकी प्रयोग, जलवायु परिवर्तन आदिले त झन् प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढाएको छ नै ।
हरेक वर्ष विश्व समुदायले अक्टोवर महिनाको १३ तारिखमा विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवसका रुपमा मनाउने गर्छ । अनेक किसिमका कार्यक्रम, सभा सम्मेलन, गोष्ठी इत्यादिले जनजागरण फैलाउने, अनि हानी न्युनीकरणका लागि यस दिवसको महत्व धेरै छ ।
सन् २०२१ को प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवसको नारा चाहिँ 'International cooperation for developing countries to reduce their disaster risk and disaster losses' रहेको छ । विश्वभरिका देशहरूबीच प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण निम्ति सहकार्यको पैरवी गर्न यो दिवसको भूमिकालाई यो वर्ष विशेष जोड दिइएको छ ।
प्राकृतिक प्रकोपसँग हामी जुध्न सक्दैनौं । हामीले केवल पूर्वतयारी तथा सतर्कता अपनाएर हुन सक्ने हानि तथा जोखिम न्युनीकरण मात्र गर्न सक्दछौं, हैन र ? सन् १९८९ को राष्ट्र संघको साधारणसभाले प्राकृतिक विपत्तिविरुद्ध पूर्वतयारी र जागरणको अभिवृद्धिका लागि यस दिवसको शुरुवात गरिएको हो र आज पनि यस दिनमा सञ्चार माध्यमहरूले विश्वभर यस विषयमा प्रभावकारी ज्ञान, सीप र धारणाको प्रवाह गर्छन् ।
यसका साथै समुदाय, राष्ट्र अनि क्षेत्रकै जागरणस्तर बढाउनुपर्छ । पूर्वतयारी संरचनामाथिको पहूँच बढाउन अनि पीडितहरूको संरक्षणका लागि विशेष आह्वान गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको योजना छ । छोटा–छोटा दूरीमा फरक भू–बनोट, हावा–पानीका लागि विश्व समुदायमा परिचित नेपालले पनि समय–समयमा धेरै प्राकृतिक विपत्तिहरूको सामना गर्नुपरेको छ । समय–समयको भूइँचालो होस् या यस वर्षको भीषण बाढी पहिरो, भौगोलिक रुपमा विविधतासँगै जटिल नेपाल सदैव प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिममै छ ।
दुःखद् कुरा चाहिँ नेपालीहरूको अपर्याप्त प्रकोप नियन्त्रण सीप र जानकारी रहेकाले हुने थप हानि र जोखिमका कारणले हुन जान्छ । राजधानी काठमाडौंकै मूलधारको खानेपानी, स्वास्थ सुविधा र आधारभूत कुराहरूको सुलभतामाथि भुईँचालोले कडा प्रश्न चिह्न उठाएको हामीले चाल पाएकै हौँ । राजधानीको त्यो हविगतले सापेक्षित रुपमा दूरदराजका गाउँहरूको अवस्था सहजै बयान गर्छ । नेपाली पाठ्यक्रममा अझै पनि प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण गर्न प्रयोगात्मक अभ्यास र व्यवहारिक शीर्षकहरू नहुनु झनै दुःखदायी कुरा हो ।
अझ अव्यवहारिक विकासे ज्ञान जस्तै भुँईचालो आउँदा टेबलमुनि या घरभित्रै रोकिएर छेलिएर आडमा बस्ने भन्ने ज्ञानहरूले ठ्याक्कै विपरीत ज्यान जोखिममा पारेको र बाँच्नुपर्ने ज्यान पनि मृत्यु र अङ्गभङ्गको जोखिममा परेको उदाहरण भुइँचालोताका देखिएको हो । माटो सुहाउँदो प्रविधि र प्रक्रियाको साटो हामी आयातित कुरामा सोलोडोलो लागेको परिणाम हुनसक्छ । अझै पनि नेपाली भूमिमा प्राकृतिक प्रकोप भएमा न्युनतम पूर्वतयारी पनि छैन ।फेरि प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण गर्ने एकमुष्ठ जिम्मा अनि जागरणका कार्यक्रम धेरै हदसम्म गैरसरकारी संस्थाको पोल्टामा पर्नु पनि दुर्भाग्य नै हो । शायद, यसै कारणले पनि भूकम्पपश्चात् धर्म परिवर्तन र मानव तस्करका कुराहरू आएका हुन सक्छन् । यस्ता संवेदनशील सवालमा सरकारी र गैरसरकारी दुवै तहको समान सहभागिता जरुरी छ । आजको दिन यी सबै कुराहरू विश्व समुदायसँगै नेपालले पनि बुझ्न र आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।
प्राकृतिक प्रकोप निवारक अनि थाम्न सक्ने संरचनाहरू बनाऔँ । आउँदा पुस्तालाई यसको पूर्वतयारीप्रति सजग गराऔँ ।